नेकपा सुदुरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्रीको नाममा चन्दा उठाएको खुलासा
सोमवार, असार २, २०७६ ०३:३०:१४
चैत २२, काठमाडाैँ । यता प्रधानमन्त्री तथा शक्तिशाली पार्टी अध्यक्षको नाममा निकटतमहरूले तल पैसा उठाएर खाइरहने, उता तिनले चलाएको धन्दाबारे जतिसुकै प्रमाण फेला परे पनि सरोकारवालाले आँखा चिम्लिरहने– यो त नेपालको रीत नै हो प्रश्न उठ्छ तर यस्ता कति व्यक्ति होलान् जसको चुलो माथिको नाम नभजाई जल्दैन । यही सेरोफेरोमा यौटा पछिल्लो प्रमाण फेला परेको छ– प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो क्षेत्रमा ल्याउनसमेत जुवा खेलाउनेसँग मोलमोलाई गरिएको ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली धनगढी जाँदा प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले कैलालीकै ‘साथी’ होटलस्थित क्यासिनोबाट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ लगेको प्रमाण भेटिएको छ । प्रजातन्त्र दिवसको दिन फागुन ७ गते बिहान ९ बजेर नौ मिनेट जाँदा क्यासिनोको तर्फबाट डेढ लाख निकासाको निम्ति म्यानेजर क्रिस्ट्यिानो कु ले, स्ट्यान टी, इभान ली, कौशल र किशोर सिल्वाल, ड्यानियल कोङ, सन्तोष थापासहितलाई पठाएको इमेलमा भनिएको छ– किशोर सरले भन्नुभएअनुसार, अर्कोे हप्ता हुने प्रधानमन्त्रीको धनगढी आगमनका निम्ति पूर्व उद्योगमन्त्री कर्ण थापालाई हामीले नेपाली रुपैयाँ एक लाख पचास हजार दिनु छ, रकम छिटो निकाशा होस् । यो पैसा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमै खर्च भयो या थापाको गोजीमा गयो ? प्रष्ट छैन सरकार प्रमुखको सुदूरपश्चिम यात्रासँग जुवाघर सञ्चालक विदेशी नागरिकको के सरोकार र साइनो ? यसरी थापाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण क्रममा ठाउँठाउँबाट ३५ लाख रुपैयाँ उठाएको स्रोतको भनाइ छ जबकि उनले पाँच लाख मात्रै उठेको बताउने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली किड्नी प्रत्यारोपण गर्न दशक अगाडि भारत जाँदा पनि उपचार खर्च भन्दै झापा पुख्र्याैली घर भएर अहिले धनगढीमा समेत व्यवसाय गरिरहेका श्याम टायलसँग उनले यसरी नै २५ लाख लिएको बताइन्छ । बाजुराबाट ०५६ सालमा चुनाव लड्दा समेत आठ लाख र ०६४ सालको चुनावमा ३० लाख रुपैयाँ कमिटीमा जानकारी नदिइ थापाले मुठ्ठी पारेका हुन् । ०७० सालको चुनावको किताब अहिलेसम्म दिएकै छैनन् ।
आर्थिक हिनामिनाकै कारण सुशील कोइरालाको मन्त्रिमण्डलबाट हटाइएका उनले लगत्तै नयाँ गाडी किनेका थिए । मन्त्री हुँदा जोडेको ८० लाखको अपार्टमेन्ट भने भूकम्पले भत्काएको थियो । पारिवारिक अवस्था कमजोर भएका थापाले काठमाडांैको कोटेश्वरलगायत ठाउँमा घरघडेरी र अपार्टमेन्ट किनेका छन् । नवाैँ महाधिवेशनका लागि उठाइएको एक करोड ५० लाख नबुझाएपछि उनलाई उद्योगमन्त्रीबाट हटाइएको चर्चा उतिबेलै चलेको हो ।
मन्त्री हुँदा उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसमा ५० जनालाई व्यापारी बनाएर अमेरिका पठाउन खोजेपछि अमेरिकी दूतावासले त्यो विवरण अख्तियारलाई पठाएको थियो । तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान कार्कीले मन्त्री नहटाए कारबाही गर्न बाध्य हुने जानकारी दिएको कारण पनि थापालाई सुशील कोइरालाले राधा ज्ञवालीकै शैलीमा पदबाट बर्खास्त गरेको पार्टीमा जानकारी छ । दुई विवाह गरेर चर्चा बटुलेका थापाले धनगढीको आयलनिगमलाई हरेक महिना ५० लिटर तेल दिने उर्दी जारी गरेको चर्चा पनि नेकपा वृत्तमा छ ।
दुई बिहे र ०५१ सालमा रामारोशन पर्यटकीय क्षेत्रको अध्ययन गर्न दिएको रकम हिनामिना गरेका कारण पार्टीबाट कारबाही भएपछि थापाको भीम रावलसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन । पर्यटन राज्यमन्त्री रहेका रावलले नै थापालाई रामारोशनको अध्ययनका लागि दुई लाख रकम दिएका थिए । ०७४ चुनावको अघिल्लो दिन पनि थापाले रावल हराउन अजेय सुमार्गीबाट रकम लिएर अछाममा वितण्डा मच्चाएपछि रावल झन् आक्रोशित थिए । रामारोशन गाउँपालिकामा रावल हराउन पैसा मात्रै बाँडेका थिएनन् कांग्रेसलाई उत्तेजित बनाउन कांग्रेस कार्यकर्तालाई आफैँले कुटपिट गरेका थिए । पछि आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताले थापाको गाडी जलाइदिए भने प्रहरी चौकी मुस्किलले जोगिएको थियो ।
पार्टी एकतापछि आफू मन्त्री हुने आसमा कैलाली–२ का सांसद झपट रावलले थापालाई प्रदेश अध्यक्ष बनाउन भीम रावललाई मनाएका थिए । भीम रावलले भने त्यतिबेला पूर्वमन्त्री भानुभक्त जोशीलाई प्रदेश अध्यक्ष बनाउन खोजेको बताइन्छ । थापा आफ्ना गल्ती सामाजिक सञ्जालमा आउन थालेकोमा आक्रोशित बन्दै गएका छन् । सांकेतिक रूपमा थापाविरुद्ध फेसबुक स्टाटस लेखेका पत्रकार एकीन्द्र कुँवरलाई सिंहदरबारको गुटको अगुवा बैठकमा कुट्ने धम्की दिएका थापाले पत्रकार खेम भण्डारी, अर्जुन शाह, प्रकाशविक्रम शाहलगायतलाई समेत देखाइदिने धम्की दिएको चर्चा छ ।
बाजुरा महासंघका अध्यक्ष प्रकाश सिंहलाई ठीक ढंगले चल्नू भनेर थापानिकटले चेतावनी दिएको खबर छ । पुराना र खास सहयोगी दयालबहादुर शाहीलाई धम्क्याउन खोजिएपछि शाहीले नराम्रोसँग गाली गरेका छन् । शाहीले गाली गरेपछि थापाले शाही नेता होइन, पत्रकार हो, कुनै अवसर दिनु पर्दैन भन्न थालेका छन् । (चैत २० गते बुधबारको जनअास्था साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार)
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, चैत्र २२, २०७५, ०७:०४:००